Ukuba ufumana ubunzima bendoda yakho, kufuneka uncede! Siza kukuxelela indlela yokuhlangabezana neenkomfa ezili-10 zesilisa.
1. Inkathazo yesibini.
Ukuqaphela le nkxalabo indoda ayiyi kwenza umgudu omkhulu. Ukuba uqaphela ukuba umntu uyakucinga ngaphandle kokukhupha amehlo, ngoko uyakuthanda kakhulu. Kodwa ukwesaba ukuza kuwe kunye nendlela ongazijonga ngayo i-chic, ngandlela-thile ukhetha loo ntokazi, ebonakala elula kwaye ethobe ngakumbi kunakho.
Yintoni enokuyenza kule meko? Njengoko i-psychologist eyaziwayo uDmitry Sinarev ichaza, oku kwenzeka ngenxa yokuba indoda, ebona ibhinqa elihle, iqala ukucinga ukuba kufuneka ibe nomntu. Yaye ukuba amathuba akhe amancinci, kwaye loo ntokazi ayinakuhlala yedwa. Kwaye nangona eyaziwa naye kwaye eqala ulwalamano, uya kuhlala ekulwela ingqalelo yakhe, njengoko uya kuhlala ejikelezwe zizihlwele zebalandeli. Ukuthintela loo ngcinga kumntu, kufuneka ufike kuye kuqala. Uze undikholelwe, uya kuqonda ukuba unomdla kwaye kulula ukuthetha nawe.
2. I-Complex engenamthandi ongenanto.
Ukuba uqaphela ukuba indoda yakho ihlala ixolisa ngenxa yento engazange yenze. Okanye uhlala ebuza ukuba wenza ntoni na, ngoko unokunyamekela kakhulu, okanye ufumana ubunzima bokuba ngumthandi ombi. Uhlala emncintisana nomntu, uthetha ngokuzithoba kwakhe. Ukuba indoda ikubuza ukuba zingaphi izithandwa phambi kwakhe kwaye ngubani olungcono, kunokukhokelela ekubeni uya kukuxelela ukuba uye wonakalisa, kwaye akanako ukuphumla nawe. Kwakhona uya kunitshela ukuba akayi kukuthemba wena kwakhona, kwaye zonke izihlobo zakho ziya kulahleka.
ukwenzela ukuba oku kungenzeki, kufuneka uchaze kuye ukuba nguye owona mhle kwaye nguye kuphela. Mxelele ukuba ushiye abathandekayo bokuqala, kuba uyona mhle kwaye akukho mntu ulungile kunabo emhlabeni. Kumele uncede akhululwe.
3. Inkomfa yokukhohliswa.
Ukuqaphela into enzima kunzima kunzima, kuba kunzima kakhulu. Ukuba uchitha ixesha elininzi kunye nomntu wakho, kwaye akazange akhonze ngethuba ngeli xesha. Kwaye xa uzama ukuza kuye, uhamba nawe kwaye uhlala ethetha ngabahlobo bakhe bokuqala kwaye uxela indlela abaye bamphosa ngayo. Unako ukuthetha ngale nto ngeeyure ngaphandle kokuyeka.
Kwiimeko ezinjalo, kufuneka usebenzise amaqhinga okulinda. Ungazami ukukhawuleza ulwalamano naye. Emva kwakho konke, amadoda anenkathazo enjalo ayesaba ukukuthemba kwaye kubonakala ngathi kubo, njengabanye bayisebenzisa. Yenza umntu wakho azi ukuba isinyathelo sokuqala okulindeleyo sisuka kuye. Yiba kunye kwaye unyanisekile, kuba akayilindele le nto kuwe, kwaye ngoko unako ukuphula zonke izicwangciso zakhe eziqhelekileyo.
4. Inkomfa yendoda engaziwayo.
Ukuba indoda yakho ibuya ekhaya isuka emsebenzini, iphulaphule onke amabali akho, oko wakwenzayo emini, ngelixa yena ngokwakhe engathethi nto ngeengxaki zakhe, ke le nto iyinkimbinkimbi kuye.
Kubaluleke kakhulu ukuba nawuphi na umntu oza kuzaliseka. Ukuba akayivuyo ngumbono wakhe, kwaye akayi kumkholisa, ngoko uya kuhlupheka ngenxa yobunzima bakhe bonke ubomi bakhe. Zama ukumnceda, mbuze into ayithandayo ukuyenza ebuntwaneni bakhe, yintoni eyayiyithandayo? Kwaye, ngokusekelwe kwimpendulo yakhe, ncedise ukuqonda ukuzonwabisa kwakhe kubuntwaneni kwizinto zokuzilibazisa ngokwenene ekudala. Xa enomdla wokuzilibazisa, unokunandipha ubomi kwaye aphelise le nkathazo.
5. Inkcazo ibonakala ngathi ipapal.
Ngokuqhelekileyo le nkxwaleko ibonakala xa kukho umda omkhulu weminyaka phakathi komntu nomfazi. Zama ukuxelela umntu wakho ukuba ubhetele kakhulu kunabanye kwaye akukho mntu unomdla kwihlabathi. Njalo umkhumbuze oku.
6. Inkxalabo yomfundi ohloniphayo rhoqo.
Amadoda anjalo azama ukuba ngcono kunomntu kwaye akhathazeke kakhulu xa bengenakukwenza oko bathembisa.
Kufuneka uvumele umntu wakho azi ukuba awudingi kakhulu kuye. Into enayo ngokwaneleyo ebomini kunye neenkwenkwezi enye ukusuka esibhakabhakeni ngaphezu koko.
7. Ubunzima bokunciphisa.
Ubunzima bokunciphisa ukungena kumntu. Into kuphela esiyidingayo ukuqinisekisa ukuba lolu bunzima luphazamisa njani indoda yakho. Uphawu lokungaphantsi, ngumona.
Zama ukuxelela umntu wakho ngokuphindaphindiweyo malunga nobuhle bakhe. Dumisani ingqondo yakhe kunye neentloni. Kodwa, kwaye ukuba umntu wakho waqala ukuphinda ahlaziye ngenxa yeengxaki zakhe, ke ucinge malunga nokuba ufanele ukulwa kunye nobunzima bakhe ukunyamezela konke oku.
8. Inkomfa yexabiso elaneleyo lemali.
Amadoda anzima kangaka, xa adlula ngendawo yokudlela ebiza kakhulu, anciphise iintloko zawo aze aphephe intetho kwiingxelo zemali. Kwaye abantu abahlala eninzi, babiza i-bourgeois. Kwaye kukho namadoda aqhubeka esho malunga nokuba kuya kuba kuhle kangakanani ukuba babephethe izikhwama ezibizayo, bahamba ngemoto ebiza kwaye bahlala eRublyovka.
Ukuba ubona izici ezinjalo kumntu wakho, ngoko kufuneka uzame ukumchazela ukuba ngaphandle kwezinto eziphathekayo, kukho izinto ezingokomoya. Xelela umntu wakho ukuba awukhathaleli ukuba unayo imali kwaye uyamthanda kungakhathaliseki ukuba uyayithobela kangakanani. Yintoni ebaluleke kakhulu kuwe ebomini ingqalelo yakhe kwaye iyabiza ngaphezu kwanoma yimaphi imali.
9. Inkcazo yokungafani.
Kwenzeka ngenxa yokuba uhlukile kwaye ungahambelani ngokumalunga nesimo sakho. Kwaye bakhulela kwiimeko ezahlukileyo. Ukuba ubona ubunzima obunjalo nomntu wakho, kufuneka uzame ukufumana umdla oqhelekileyo wenze enye into. Zama ukusebenzisa igama ngokuphindaphindiweyo. Kufuneka ube yinye.
10. Inkathazo yobudala obuphakathi.
Wonke umntu unenkathazo ebini ehlobene nobudala ebomini bakhe. Inkathazo yokuqala ibonakala kwiminyaka engama-30, kwaye okwesibini kwenzeka kwiminyaka engama-40-45. Kwimeko yokuqala yentlekele, indoda idibanisa oko iphumelele nento ayenokwenza. Kwaye kwimeko yesibini, usebenza kwimpembelelo yobomi bakhe, unokuba nomnqweno wokutshintsha imisebenzi kunye nabantu abakujikelezile.
Ngenkathazo yokuqala, usongelwa ukuphuka kwintsebenziswano okanye isithembiso sokutshata. Kodwa ingxaki yesibini nzima kunzima. Kumele ube nomonde kwaye ube ngumhlobo oyinyaniso kuye.
Ngoku siyazi indlela yokujamelana neenkomfa ezili-10 zeesilisa kwaye ziya kuhlala zikwazi ukutshintsha amadoda ethu athandekayo ukuba angcono.
Yintoni ebonakala njengamantombazana
Izisombululo zabasetyhini xa bejongana namadoda
Indlela yokufumana abahlobo abalungileyo kunye nabahlobo abaninzi
Indlela yokujamelana neengxaki zeminyaka ephakathi?
Awuyi kubuyiselwa emva kokutya
Ulwaphulo lomsebenzi kwi-kindergarten
Indlela yokupheka i-squid kwisaladi ukuze ithambile kwaye ithenda
I-Influenza kubantwana ukuya kunyaka: indlela yokunyanga?
Bagels nge jam "Ukuguqula"